🥇 ▷ Kumaa sameyn karay AppleListenerkaas garaacista? ✅
Kumaa sameyn karay AppleListenerkaas garaacista?
Tan iyo markii la bilaabay Disembar 2016, AirPods-yada waxay ku raaxeystaan ​​sumcad xumo aad u weyn. Dhanka kale jiilkii labaad ee teleefoonada bilaa-waayirka ah ee gabi ahaanba waa in la garaacaa laakiin marka la barbardhigo tijaabinta tartame.
Apple AirPods oo leh cod xun: Warbixinta Macaamiisha ayaa sidoo kale adeegeysa doorka kale ee bilaa wireless
Warbixinta Macaamiisha ee saldhigeedu yahay Mareykanka ayaa la barbar dhigaa Stiftung Warentest-ka Jarmalka. Tijaabooyin hore iyo natiijooyinka ururka macaamiisha ayaa sababay inay kacsanaan ku dhacaan Apple-World-ka hore. Isbarbardhiga cusub ee u dhexeeya shirkadda ‘Apple’s AirPods’ iyo Samsung’s Galaxy Buds (oo loo maro 9to5Mac) ayaa mar kale muhiim noqon kara marka laga hadlayo sheekada u dhexeysa labada shirkadood.
Sida laga soo xigtay tijaabiyaasha, isbarbardhiga labada makarafoon ee bilaa maraakiibta ah ayaa ku guuleysan kara moodooyinka dhagaha ee Kuuriyada Koonfureed. Gaar ahaan, tayada codka ee ‘AirPods’ waxay u gudubtay koodhka. Warbixinnada Macaamilka ayaa ku sharraxay bass mid ka mid ah qodobbada daciifka ah. Muruqyada hooseeya ayaa runtii jira, laakiin waxay ka maqantahay dhawaqa “wareega” iyo “qoto dheer”. Codku wuxuu u dhowdahay inuu la mid yahay EarPods-kii hore ee siligga ahaa.
Kala duwan yihiin Galaxy Buds. Baasaska ayaa xoogaa xoogaa loo adkeeyay, laakiin codadku way ka fiican yihiin kuwa loo yaqaan ‘AirPods’. Isku soo wada duuboo, isugeynta tirada kale waxay ka tagtay aragti ka fiican dhagaha dhagaha cad ee Apple.
Halkan waxaa ah tijaabooyinkeena Samsung Galaxy Buds iyo Apple’s AirPods (jiilka 1aad).
Galaxy Buds iyo Apple AirPods isbarbar dhig toos ah:
Apple AirPods: Darajooyinka wanaagsan ee is dhexgalka
Si kastaba ha noqotee, tijaabiyayaashu waxay amaaneen isku xirnaanta aadka u qoto dheer uguna fudud ee AirPods iyo aaladaha kale ee Apple. Tijaabooyinka sheybaarka ee tayada dhawaaqa wicitaanku kama mid aha baaritaannada. Si kastaba ha noqotee, tijaabiyayaashu waxay xusayaan in AirPods ay ufiican tahay kan kale marka loo eego kuwa kale ee Bud Buds. Waxyaabaha kale, tani waxaa ugu wacan xakamaynta fiican ee sanqadha asalka.
Isbarbar dhigga labada kiis ma helin guuleyste cad. Labada soo-saare labadaba waxay ku bixiyaan faa’iidooyin iyo faa’iido-darro halkan. AirPod-yada, oo ay kujiraan baytariga kujira kiiska kaydinta, ayaa leh neef dheer. Dhanka kale, waxaa jira kaliya hal nooc oo kiiska Samsung ah oo kanina wuxuu ku siinayaa ku dallacaadda wireless-ka. Ayaa keenaya AirPods kiiska dacwadda bilaa wireless? Apple soo iibsato, waa inay maalgeliso 50 euro in ka badan tan caadiga ah. Xaaladaha labada shirkadood soo saaray waa yar yihiin si ay si raaxo leh ugu qaataan jeebka – xitaa haddii arrinta Apple ay waxyar ka khafiifsan tahay.
Mustaqbalka dhow, AirPods cusub ayaa la soo bandhigi karaa – halkan fikradda si aad u aragto:
Waxaa jiray daabacado cad oo loogu talagalay howlaha taabashada ee AirPods. Meelkan waxaad siisaa Galaxy Buds isticmaale qaabab badan oo badan oo lagu xakameeyo muusikada. Adigoo ku celcelinaya garabka dhegaha, shaqooyin kala duwan ayaa la xakamayn karaa.
Warbixinta Macaamiisha ayaa sidoo kale tijaabiyey labadaba dhagaha dhegaha laga helo aaladaha tartanka. Natiijadu waxay ahayd in Galaxy Buds ay sifiican ula shaqeeyaan iPhone marka loo eego AirPods oo leh qalab Android ah. Galaxy Buds waxay ka heshay 86 dhibcood warbixinnada Macaamiisha, halka AirPods kaliya ay ahayd inay degaan 56 dhibcood. Si kastaba ha noqotee, tijaabiyayaashu waxay sheegeen waqti isku mid ah in AirPods ay kufiican yihiin isticmaaleyaal badan, laakiin guuleystaha cad wuxuu ka yimaadaa Samsung.